Tunis: isku dhac u dhexeeya booliiska iyo mudaharaadayaasha Tataouine - teles relay
Tunisiya: Isku dhacyo u dhexeeya booliiska iyo mudaaharaadyada ka dhacay Tataouine
DIB U EEGIDCOMPANY
Dagaallada ayaa dib u biloowday Isniinta u dhaxaysa xoojinta sharciga iyo dibad-baxayaasha Tataouine, ee xaddidan koonfur ee Tuniisiya, halkaas oo dibad-baxayaashu ay ku andacoonayaan kumanaanka shaqooyin ee ay ballan qaaday xukuumadda sannadka 2017.
Iskahorimaadka ayaa mar kale ka qarxay, Isniinta, Juun 22, magaalada Tataouine, ee koonfurta Tunisiya, oo u dhaxeysa bilayska iyo dibad-baxayaasha. Waxay u baahan yihiin shaqooyin iyo hirgelinta qorshe shaqaaleynta oo ay ballanqaadeen hay'addu 2017.
"Xaaladda waa mid qatar ah, daaqadda gurigayga waxaan ku arkaa booliska oo ridaya gaaska dadka ka ilmeysiiya isla markaana baacsanaya dhalinyarada," ayuu Ismaaciil Smida, oo deggan Tataouine, u sheegay Reuters. Markhaati kale ayaa sidoo kale ka warbixiyay isku dhac dhex maray bilayska iyo boqolaal mudaharaad dhigayay oo dhagxaan tuuraya, jidadka xirmay oo dalbanaya "xuquuqdooda horumarka iyo shaqaalaynta".
Ciidamada ayaa la geeyay xarumaha dowladuhu leeyihiin, Wasaaradda Difaaca ayaa tiri.
U yeer shaqo-joojin guud
Iyagoo dhalleeceynaya "awood xad dhaaf ah oo aan cadaalad aheyn" oo ka dhan ah banaanbaxayaasha, xarunta midowga ee awooda badan ee UGTT ayaa ku baaqday shaqo joojin guud Isniinta Tataouine. Dukaammada ayaa furan, laakiin adeegyada guud iyo xarumaha dawladda ayaa wali xiran, sida ay soo wariyeen wariyeyaasha AFP.
Toddobaadyo dhowr ah, dhallinyarda iyo shaqo la aanta ka socota Tataouine, oo ah magaalo 500km u jirta Tunis, waxay daawanayeen fadhi ay ku dalbanayaan fulinta heshiisyada lala galay xukuumadda 2017, iyagoo balan qaadaya shaqooyin iyo maalgashi gobolkan xaddidan. Waxay si xoogleh u xireen wadooyinka qaar ee magaalada iyo gawaarida gawaarida ee shirkadaha shidaalka iyo gaaska ee u adeega goobta wax soo saarka ee El Kamour, oo 160 kiiloomitir u jirta, dhexda dhexdeeda lamadegaanka.
Sida laga soo xigtay Wasaaradda Tamarta, rabshadahaas wax saameyn ah kuma yeelan soosaarka saliida iyo gaaska, si ka duwan 2017, markii dibad baxayaashu ay ugu dambeyntii xireen alwaaxyada dhuumaha. Dowlada ayaa markaa balan qaaday inay maalgalinayso 80 milyan oo diinaar (kudhowaad 27 milyan oo Euro) sanadkasta hormarinta Tataouine, ayadoon arintaas wax lagaqaban, sida ay sheegtay ururka UGTT. Iyo kaliya qayb ka mid ah kumanaanka shaqo ee loo ballanqaaday, shirkadaha saliida ama qaab dhismeedka dayactirka deegaanka, ayaa la abuuray.
Tataouine, gobolka ugu badan ee ay saameeyeen shaqo la’aanta
Toban sano ka dib kacaankii, Tataouine, oo ah aag aad u fog koonfurta Tunisiya, halkaas oo inta badan kheyraadka batroolka yar ee Tunisiya ay ku yaalliin, ayaa weli ah mid aan horumarsanayn, NGO-ga Oxfam wuxuu ku tilmaamay warbixin lagu daabacay ismaandhaafka Isniinta.
Sanadka 2019, "degane Tataouine, oo ah gobolka ay inta badan saameeyeen shaqo la'aantu (28,7%), ayaa afar jeer ay u badan tahay inay shaqo la'aani ka badan tahay tan deganeyaasha Monastir", oo ah aag xeebeed faa iido u leh, hoosta ka xariiqaya Oxfam. Adeegyada caafimaadka dadweynaha ayaa sidoo kale si aad ah liidata loo qaybiyey, iyada oo 10,2 sariirood oo daryeel caafimaad oo sarreeya ah ay gaarayaan 10 oo deggan Tunis, marka la barbar dhigo 000da Tataouine.
Madaxweyne Kais Saied, oo booqanayay Faransiiska Isniintii, ayaa la kulmay dhaqdhaqaaqeyaal ka socda Tataouine bishii Janaayo, isaga oo ku casuumay inay soo jeediyaan fikradaha mashruuca iyaga oo aan sugin gobolka.
Dawladdu "waxay rabtaa inay na tuntay"
Wasiirka Shaqada Tunisiya, Fethi Belhaj, ayaa ku xaqiijisay wareysi ay siisay idaacad gaar loo leeyahay in dowladdu ay ka go'an tahay xushmeynta "dhammaan heshiisyadii" ee 2017. "Rabitaanka dibadbaxayaasha waa sharci (()) ma aha in la carqaladeeyo xarumaha dowladda, ”ayuu raaciyay.
Khalifa Bouhaouech, oo xubin ka ah isuduwaha fadhiisinka El Kamour ayaa yidhi: "Dawladu wax qorshe ah oo ay leedahay ma ilaalinayso balanqaadyadeedii, waxay rabtaa inay na tumanto." Waxaan u dirnay waraaqo (...) saraakiisha gobolka inbadan laakiin ma helin wax jawaab ah, sidaa darteed xalka ayaa ah inaan ku laabano banaanbaxyada, "ayuu yidhi.
Maqaalkani wuxuu u muuqday markii hore on: https://www.france24.com/fr/20200622-tunisie-nouveaux-heurts-%C3%A0-tataouine-o%C3%B9-les-manifestants-r%C3%A9 Baaqa -jobs
Beljamka: Brussels: Wadada isku xirta Louise ayaa dib loo habeeyay si loogu anfaco dadka baaskiil wada
Sophie Wessex ceebta: Countess waxay ku dhacday faallooyinka 'fadeexan' ee ku saabsan hogaamiyaha UK